Izinkolelo Zokuphuma Kwengane Amazinyo – The Ulwazi Programme
Phambilini ukukhumuka kwengane amazinyo ikakhulukazi okokuqala, bekuba yindaba kontanga bayo, nasemndenini wayo uqobo. Ingane ezokhumuka izinyo ibidonswa ngendlebe kuthiwe ize ingalilahli noma yikanjani. Bekuthiwa uma selikhumukile mayiphume iye ngaphandle kwegceke ifike ikhulume ithi ‘‘Nhloyile, nhloyile ngiphe izinyo elisha mina ngikuphe elidala’’ isho lamazwi icimezile. Uma isiqede ukuwasho, iyagxamalaza bese ilijikijela kude ilikhiphe phakathi kwemilenze yayo. Emva kwalokho bekuthiwa hamba uqonde ekhaya, ungalokothi ubheke emuva ngoba ngeke limile izinyo elisha uma uke wabheka emuva. Abanye bekuthiwa mabasho lawo magama bese beliphonsa phezu kwendlu.
Ngisho izingane ezizalelwe emadolobheni ngeminyaka yawo 1950 kuya emuva uma zinabazali abanezimpande zasemakhaya bezitshelwa ngalomkhuba, ziwenze khona lapho emalokishini.
Abadala bathi unhloyile inyoni efika ebusuku kuphela iphethe amazinyo amasha, azomila kosekhumukelwe bese ihamba namadala. Kuthiwa lena kwakuyindlela yokufundisa ingane ukuthi ingayilahli noma yikanjani insila yayo, ngoba uma kwenzekile yawela ezandleni ezingalungile ayikho into emlungelayo empilweni, ngoba abantu abagangile bathatha leyo nsila bayihlanganise nemithi yabo bathakathe ngayo umndeni noma ingane uqobo lwayo.
Source: Ilanga langeSonto, 10 April, 2011, Pg 8